Tenga Methandrostenolone poda (72-63-9) Vagadziri & Fekitori
(1 kasitoma ongororo)
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder ndeimwe ye androgenic-anabolic steroid ine mukurumbira wakawanda pakati pevatambi uye varimi vomuviri pasi rose. Iyo yakawanda inoshandiswa nekunakira muviri uye zvinangwa zvekuita kuti zvive zvakakurumbira.
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9) video
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9) Tsanangudzo
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder ndeyomuromo-inobatsira anabolic steroid. Kune vashandi vekugadzira muviri, kuti zvibudirire zvichiita kuti musimba kuwedzere uye kuwedzerwa muhukuru, muviri wemetabolism inofanirwa kunge iripo nguva dzose yakakwirira, iyi steroid inokurudzirwa zvakakosha neyiyi yekuwedzera. Mishonga inoshanda mu Dianabol mapiritsi uye mahwendefa ari Raw Dianabol powder anoshanda nokukurumidza kuumba nzvimbo yevanabolic mumutumbi wemunhu unoita kuti zvirwere zvemetabolism zviitike.
Dianabol inowedzerawo hutorike hwekuchengetedza hutano hwemisumbu mumutumbi. Izvi zvinodaro ndezvokuti zvinovandudza huwandu hweprotini hunogona kugadzirwa nemuviri wako chero nguva ipi zvayo zvichiita kuti kukura kweusimba hwemasimba uye simba.
Uyezve, Dianabol anobvisa zvachose manzwiro ekuneta izvo vanhu vanogona kuwana panguva yekugara maitiro ekugadzirira. Dianabol inonziwo inowanikwa nekuvandudzwa kwe calcium mumuviri. Migumisiro yeiyi inowedzera calcium inowanikwa mumapfupa uye nokudaro inowedzera simba rose romuviri uye kugadzikana.
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9) Specifications
Product Name Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder
Kemikari Name Metandienone; Dianabol; Metanabol
muchiso Name Averbol, Dianabol, Danabol
Kirasi yeMishonga Oral anabolic steroid
Molecular Wsere 300.43512
Monoisotopic Mass 300.441 g / mol
Kunyorera Point 165-166 ° C
Biological Half-Life 3-6 maawa
ruvara Yakachena kusvika kune machena machena macristine powder
Skukodzera Zvinonyanya kusvibiswa mumvura
APane Yakagadzirirwa kuvaka muviri uye mutambi wekugadzira
Chii chinonzi Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9)?
Uyezve, Dianabol anobvisa zvachose manzwiro ekuneta ayo vanhu vanogona kuwana panguva yekugara maitiro ekugadzirira. Dianabol inonziwo inowanikwa nekuvandudzirwa kwe calcium mumuviri. Migumisiro yeiyi inowedzera calcium inowanikwa mumapfupa uye nokudaro inowedzera simba rose remuviri uye kugadzikana.
Iyo Yakakura Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9) mabasa
Dianabol anoshanda nenzira dzakasiyana-siyana kuti abatsire kukurumidza musumbu kukura, uye chimwe chazvo chiri kuwedzera kubudiswa kwemapuroteni.
Izvi zvinobatsira nekugadzira mishonga mitsva uye kugadzirisa zvigadzirwa zvakakuvara zvakakurumidza. Izvi, zvakare, zvinopa zviitiko zvinooneka nekukurumidza! Imwe nzira Dbol inobatsira muviri ndeyokuwedzera kuchengetedza kwe nitrogen.
Kunyanya nitrogen muviri wako une nguva refu iwe unogona anabolic kuramba! Dianabol inobatsirawo miviri yedu kushandiswa kwemakhahydrates yatinodya zviri nani. Izvi zvinovandudza simba redu uye izvo zvinokubvumira kuti uende zvakanyanya mukurovedza!
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9) Dosage
Dianabol dheji yevakatanga
Kana uri kushandisa Dianabol kwenguva yako yokutanga, muyero wakakurudzirwa uri pakati pe15mg-30mg zuva nezuva nekuda kwevatangisi. Zvinenge zvakanakira kutanga nekutora 15mg pazuva kwekutanga kwemaviri maviri matatu vhiki boka rinozowedzerwa kusvika 30mg zuva nezuva kumavhiki matatu apfuura.
Kusvetwa muyero muzuva rose kwaizokurudzirwawo nokuda kwehafu yeupenyu hwe Dianabol. Izvi zvinoreva kutora, somuenzaniso, hafu yesero iyo mangwanani uye kutora imwe hafu masikati.
Dianabol dosage yevashandi vari pakati
Mushure mokutanga kwema6-masvondo ekutenderera kwe Dianabol muyero, unogona kufunga kuwedzerwa kuyerwa kwemuviri wepakati. Pasi pesero iyi, unogona kutora kusvika ku 30-50mg pazuva. Iwe unofanira kutanga nokutora 30mg zuva nezuva pakutanga kwekufamba kwako uye uende mberi kune 50m zuva nezuva kusvika kumagumo ekufamba.
Dianabol kushandiswa kwevanoshandisa vashandi
Vanhu vazhinji vanozoomerera ku 50mg dhigiriro kunyange kana vachisvika pakakwirira ye Dianabol dosage. Zvisinei, vamwe vashandisi vekare vanogona kusimudza dhizi dzavo kusvika ku 75mg pazuva. Iwe unofanirwa kuona kuti miyero yakadaro ndeyevashandi vane ruzivo sezvo inogona kuwedzera mikana yeDealbol madhara.
Dianabol dheji yevakadzi
Vakadzi vakawanda vanotora Dianabol vachitsvaga uyerogenic simba. Zvisinei, panogona kuva nemigumisiro yakafanana neshoko rinoshanduka, kukura zvakanyanya kwebvudzi uye masheya pakati pevamwe. Izvo zvinogonawo kukonzera kusina nguva kumwedzi. Somugumisiro, vakadzi vanorayirwa kuti vatore pasi madhiramu eD Dianabol kuitira kuti vaderedze mikana yevaya madhara. Zvichienderana nehupenyu hwemukadzi nezvinangwa zvavo, muyero wavo unogona kuve pakati pe5mg-20mg.
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9) zvinobatsira
Steroid yemuromo, vashandi ve Dianabol havadi kujowa. Izvi zvinobatsirawo vashandi kuti vatange nyore kutakura dhigiriji. Kune avo vanosarudza majekiseni, kunewo majekesheni anokonzerwa ne steroid iyi, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kune vanhu vakasiyana-siyana zvavanoda.
Nokuda kwekukura kwemakumbo emasumbu, nitrogen ine basa rinokosha zvikuru. Muviri unoda kuva nehuwandu hunokwana huwandu hweitrogen kuitira kuti uve nehutano hwekuvaka musimba.
Dianabol inowedzerawo nzira ye glycogenesis. Glycogenesis inosanganisira kuputsa glycogen muglucose. Izvi zvinowedzera hutachiona hweglucose muhutano hunokonzerwa nehuwandu hwemasimba huri mumuviri.
Wedzera maitiro e testosterone
Apo mazinga e testosterone akawedzerwa mumuviri, muviri unogamuchira huzhinji huripo hunobatanidza nehomoni iyi. Izvi zvinosanganisira kushanya kwemazuva ekudzorera mushure mekushanda, kusimbisa zvekuita zvepabonde uye kukura kwemasimba pakati pevamwe.
Dianabol inowedzerawo chiyero apo muviri unovaka mapuroteni mumasero. Mapuroteni anoitawo basa guru mukuvaka kwemasuru kubva pavanoita sezvivako zveprotini n synthesis
Kuwedzera kwekugadzirwa kwemasero matsvuku eropa
Dianabol anovandudzawo chiyero apo muviri unobereka masero matsvuku eropa. Masero matsvuku eropa anobatsira mukugovera kweokisijeni mumuviri. Somugumisiro, mumwe anokwanisa kurwisa kushanda zvakanyanya kurwisana uye nesimba guru.
Dianabol ane mano ekuderedza kuneta panguva yekushanda. Izvi zvinokonzerwa nekuwedzera kwezviitiko zve testosterone mumuviri. Somugumisiro, vashandisi vanokwanisa kudzidzisa muzvikamu zvakasimba uye kwenguva yakareba.
Kukuru kunowedzera musimba masimba nesimba
Ne Dianabol, zvinokonzerwa nevatangidzi kuwana kuwana 20-30lbs yematambudziko akaoma mukati mekutanga kwemavhiki mashoma 6-8. Vashandisi vane ruzivo rwe steroid vanokwanisa kuwana migumisiro yakanakisisa kubva kune yakadaro.
Imwe Dianabol kubatsirwa ndeyokuti inosanganisira nguva shoma. Kunyange zvazvo dzakawanda zveimwe steroid inosanganisira nguva yakareba kuti mumwe aone migumisiro, ne Dianabol pamba, zvishoma zvishoma zvemasvondo e4-6 zvinogona kuitika pakuchinja kunoshamisa.
Ne Dianabol zvikomborero, zviri nyore kune umwe kuva mwari muhutano kana kuti kuvaka muviri pasina nguva yakawanda. Kuti ubatsirwe zvakakwana kubva kuRizabol zvakabatsiro, munhu anofanirwa kuchenjerera maererano nehuwandu hwemapurogiramu ekudzivisa kusvibisa. Kana zvisina kudaro, Dianabol anogona kukuvimbisa kuti unobatsira zvikuru.
Tenga Methandrostenolone (Dianabol) powder kubva kuBuasas.com
Icho Chinyorwa Chekupedzisira kuna Dianabol yekugadzirisa muviri
Taylor N. William, MD Anabolic Steroid uye muAt Athlete, 2d ed, (2002); p.117Gerber Larry; Chokwadi Pamusoro peSteroids, (2013) p.13
Frattasio Adam; Steroid Man: Kubvuma kweMasimba ekugadzira kubva ku Golden Age Yokuvandudza (2016). p.36, p.67, p.82, p.99
Shannon Knudsen; Rise Above, (2016) p.35
Thomas John A .; Zvinodhaka, Vatambi, uye Physical Performance (2012), p.98.
Gweta Tony; Kubatana naArnold: Kuburuka kweGirlie Man (2012),
Kochakian Charles D .; Anabolic-Androgenic Steroids (2012), p.16, p.420, p.523
1 Kudzokorora nokuti Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9)
5 kubva 5
arun - Dai 6, 2019 :
Chigadzirwa METHANDROSTENOLONE (DIANABOL) POWDER inobatsira zvikuru.
Add kudzokorora kukanzura mhinduro
Your Rating Rate ... Perfect Kugona pakati nepakati Kwete kuti zvakaipa Very Poor
Raw Methandriol powder (521-10-8)